U-Muhammad Ali vs uLarry Holmes | "Uhlaselo lokugqibela"
U-Muhammad Ali vs uLarry Holmes-a umlo ongafanelanga ukwenzeka.
U-Muhammad Ali vs u-Larry Holmes wahlawuliswa njenge- "Last Hurray", u-Muhammad Ali waphuma kumhlala-phantsi eyokujongana neentshatsheli ezintsha ezingabethwanga u-Larry Holmes. U-Ali wayezama ukuba yintshatsheli ye-heavyweight yehlabathi ethathe umhlala-phantsi emva kokufumana kwakhona isihloko kuLeon Spinks ngomhla we-15/9/78 (wayekhe waphulukana nesihloko kwi-Spinks ngomhla we-15/2/78.
U-Ali wayedlulile kobona buchule bakhe kwaye ukuqala kwesifo sika-Parkinson kwase kuqale, kubonakala kuhambo olulula ukubuyela kwikona yakhe (kumlo kaHolmes) emva kwemiyalelo yoosompempe.
Kwakukho ukusetyenziswa kwe-diuretiki ngu-Ali ekhokeleni edabini kumzamo wokugcina ubunzima bakhe buphantsi, kufuneka aphulukane namatye amathathu. Ubunzima buhlile kodwa njengoko umqeqeshi wakhe u-Angelo Dundee watsho, "ukukhanya akulunganga." Intetho ka-Ali nayo ibonakalisiwe.
Uqeqesho lwalungalunganga. Akukaziwa ncam ukuba ukwazile njani ukudlula kwezonyango njengoko iingxelo ezivela kwinkampu yoqeqesho bezothusa. Mhlawumbi imali iyathetha? Wapasiswa kwaye umlo waqhubekeka ngokuchasene noHolmes owayengumlingani ka-Ali. UHolmes wayephumelele isihloko se-World Boxing Council esasingenamntu ngokuchasene noKen Norton kumlo omnandi (kwicandelo lethu levidiyo), wayekwincopho yakhe kwaye wayesenza isibambiso sesibhozo sesihloko.
Ke umlo waqala ngo-Ali kunzima ukuphosa inqindi kumjikelo wokuqala uyeke umlo wonke, kodwa yayikukuphela komjikelo apho uAli wayenalo naluphi na uhlobo 'lokubhabha' kumbutho wakhe. Uninzi lwalugxalathelane ukuya kumbona ngethemba u-Ali wakudala kodwa nge-38, kwakungafanelekanga. UAli wayehlwempuzekile kwaye kwenzeka ukubetha okungagungqiyo.
Ujikeleze emva komjikelo, ukubetha emva kwenqindi, uAli wala ukwehla. Inye into awayeyishiyile kuye yayikukuphikisana nepunch kodwa ngelishwa ayikho enye into. Umlo wafikelela kwinqanaba lokuba uHolmes angafuni ukuphinda ambethe ngenqindi, azisizele ityala lakhe langaphambili.
Ekugqibeleni, emva kwemijikelo yesohlwayo esiqhubekayo, u-Angelo Dundee wayeka umlo, engamvumeli uAli ukuba aphume kumjikelo weshumi elinanye. UAli wayekhangeleka elusizi kwaye ukude neentsuku zakhe zomnye wabona bantu babesindwa ngumdlalo wamanqindi. IHolmes iphumelele wonke umjikelo kuwo omathathu amakhadi amanqaku.
U-Ali uthathe umhlala-phantsi kwakhona kwakhona ukubuya kwakhona emva kweenyanga ezilishumi elinesine (11/12/81) kumlo wokugqibela wobomi bakhe ngokuchasene noTrevor Berbick kwi "Drama e-Bahama" -uyakuva intsimbi yenkomo iround phakathi kwemijikelo njengoko kufanelekile intsimbi ayiziswanga emfazweni.
U-Ali walala-wahamba kwimijikelo elishumi ephulukene ngokuphawulekayo kumanqaku kumlo abaninzi ababecinga ukuba uphumelele. Yayisisigqibo esisondeleyo kwaye ekugqibeleni yayikukuphela kobomi bakhe.
Kwakungumlo ongcono ukugqiba ikhondo lakhe kodwa abaninzi babenqwenela ukuba akazange alwe noHolmes. Kwakungokubetha awakuthathayo ngexesha apho imeko yakhe yomzimba yayisehla ngokukhawuleza.
Onjani wona ukuba mhle umsebenzi owawusuka koyena “mkhulu.” U-Muhammad Ali vs Larry Holmes, umlo ongafanelanga ukuba wenzekile.
Khumbula ukuphonononga ngokupheleleyo iwebhusayithi yethu yamanqindi, ineendaba zamanqindi zamva nje kunye neziphumo zamanqindi kwiphepha lasekhaya.